Kukwira Kweindasitiri: 2130, zvitsva zvenguva yemberi zvemutambo wevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Mutambo wevhidhiyo Kukwira kweindasitiri yeLinux, Mac uye Windows ine kuwedzera kutsva kunodaidzwa kunzi 2130. Izvo zvakaziviswa uye zvichauya munguva pfupi iine zvakawanda zvitsva uye zvemangwana zvemukati. Yakagadzirwa naDapper Penguin Studios uye yakaburitswa neKasedo Games, ichave ichiwanikwa paValve Steam, muzvitoro zveGOG uyezve paHumble Store. Saka kana iwe uchitova neiyi zita uye uchida zvimwe, heino nhau dzawanga wakamirira ...
Este tycoon mutambo, ndiko kuti, manejimendi inokutendera iwe kubata iro rakakura ramangwana guta kubva mugore ra2130, seizvo zita rekuwedzera rinoratidza. Neshanduko nyowani dzekuwedzera uku kunotevera, nyika yako yakanaka yakasara iri matongo semhedzisiro yehunhu hwevanhu uye makumi emakore ekuparadzwa. Ikozvino iri kupa kusimukira kune nyowani ine rima uye yakasviba nyika mauchazofanira kuita basa rako repamusorosoro kuti uchengete guta riine hupenyu nezviwanikwa zvaunazvo.
Mushure memazana maviri emakore, vanhu vakwanisa kutora maguta avoAsi ivo vachiri kunetseka nematambudziko anogarwa nhaka kubva kare. Iwe hausi kuzowana miti kana hove chero kupi, ese anogara muzvivakwa zvakakurisa nekuda kwehuwandu hwevanhu, uye anodya algae apo marobhoti achiita basa. Ipo iwe uchifanira kuvaka zvakare nyika yekare kuti uwane zvimwe zviwanikwa kupfuura zvauinazvo pakutanga.
Iko kuwedzera kuchavhurwa kwemubhadharo mudiki, nepo iyo zvachose mahara iwe unenge uine iyo yekuvandudza 2.0 kubva Rise yeIndasitiri, saka kuwedzera kwayo 2130 kuri kuuya munguva pfupi. Rini? Zvakanaka, zvinoita sekunge inogona kusvika muQ4 ye2019, saka haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti iwanikwe pamapuratifomu akawanda ayo ichave iripo. Panguva ino iwe unogona kuona rumwe ruzivo kubva pawebhusaiti ye Steam kana tenga zvirimo iyo yatovepo iwe uchakamirira 2130, kana usati wayiyedza izvozvi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Kukwira Kweindasitiri: 2130, zvitsva zvenguva yemberi zvemutambo wevhidhiyo
Ndiri Alex, anovandudza. Iko kuwedzera hakusi kwemahara, izvo zviri zvemahara zviri zvirimo zvechigamba 2.0. Ndiri kunzwa nyonganiso
Ndiri Alex, anovandudza. Iko kuwedzera hakusi kwemahara (zvine musoro), izvo zviri zvemahara zviri zvirimo zvechigamba 2.0. Ndiri kunzwa nyonganiso
Thanks Alex, ndiri kuzozvishandura.
Vivaldi 2.7 ichavandudza yako kugadzirwa iwe uchinge uchiwana kuvimbika uye kugadzikana